Honor 20 Pro: Nisy sary ofisialy voalohany tafaporitsaka | Androidsis
Nanivana ny sary voalohany an'ny Honor 20 Pro
Eder Ferreno | | Huawei, Finday
Ny Honor 20 Pro no avo lenta manaraka amin'ny marika sinoa. Roa herinandro lasa izay naseho ny daty fametrahana azy amin'ireo karazana finday vaovao avy amin'ny mpanamboatra. Sehatra iray izay efa fantatsika ny maodely tsotra indrindra ho an'ny rehetra, ny Honor 20 Lite, izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy Andro vitsy lasa izay. Ankehitriny, efa manana ny sary voalohan'ity maodely Pro ity izahay.
Efa tao amin'ny afisy famelabelarana no nanondroana an'io sokajy io dia ho tonga miaraka amin'ny lavaka eo amin'ny efijery. Ankehitriny, ireto sary ofisialy voalohany an'ny Honor 20 Pro ireto dia ahafahantsika manamafy fa izany no izy. Ny filokana avo lenta amin'ity famolavolana ity, izay mbola lamaody amin'ny Android.
Noho izany, mahita endrika isika mitovy amin'ny Honor V20. Hatramin'izao dia mbola tsy nanana sary momba ity Honor 20 Pro izahay, izay hitantsika izao mazava tsara noho io famoahana io. Amin'ity tranga ity, ny lavaka dia apetraho eo ankavanana ambony avy amin'ny efijery. Loaka iray izay tsy lehibe loatra ary aiza no misy an'ity fakantsary fakantsary ity.
Amin'ny telefaona no ahitantsika izany dia miaraka amin'ny EMUI 9 ho toy ny sosona fanaingoana. Ankoatr'izay dia manaitra ny iray amin'ireo rindrambaiko napetraka noho ny lesoka ao aminy dia ny Fortnite. Tsy fantatsika raha tena hisy izany, saingy toa hanana ilay lalao izy io na farafaharatsiny rohy fampidinana ho azy.
Amin'izao fotoana izao tsy misy data momba ny specs Inona no azontsika antenaina amin'ity Honor 20 Pro ity. Na dia mety hisy aza ny famoahana amin'ity herinandro ity, hahafahantsika mahazo hevitra momba ity telefaona ity amin'ny marika sinoa. Soa ihany fa ao anatin'ny tapa-bolana mahery ny famelabelaranao.
Na dia tato anatin'ny herinandro aza dia nisy ny tsaho milaza fa mety hitranga izany singa vitsivitsy iraisana amin'ny Huawei P30. Saingy hamela fisalasalana isika amin'ny 21 Mey ity raha ity Honor 20 Pro ity dia aseho amin'ny fomba ofisialy any London, miaraka amin'ny Honor 20.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Nanivana ny sary voalohany an'ny Honor 20 Pro
Ireo horonam-bokin'ny loholona: misy blades izao ho an'ny rehetra rehefa mivoaka ny beta